Soo dejisan Adobe Acrobat Reader 2019.021.20058 – Windows – Vessoft
WindowsXafiiskaPDFAdobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader – waa barnaamij lagu daawado faylasha qaabkiisa qaab PDF ah. Adobe Reader waxay taageertaa nooc kasta oo dukumenti ah oo qaabkan ah waxayna furaysaa faylasha PDF-yada ilo kala duwan. Adobe Acrobat Reader waxay leedahay aalado lagu daro qoraalada dukumintiga, sida midabaynta qoraalka, hoosta qoraalka ama xariiqinta, qalin qorista, faallooyinka, shaabadaynta iwm. OneDrive ama Sanduuqa kombiyuutarka iyadoo ay ugu wacan tahay koontada lagu xiray. Softiweerku wuxuu ku diraa feyl farriin e-mayl ah, ka raadin karaa ereyada kujira dukumintiga, fiiriyaa faylasha ku lifaaqan soona diri dikumiintiga PDF si uu u daabaco. Adobe Acrobat Reader waxay kaloo awood u siineysaa inay ku xirmaan aaladaha dheeriga ah si loo wanaajiyo hufnaanta shaqada faylasha PDF.
Caawinta nooc kasta oo dokumentiyada PDF ah
Fiiri oo daabac faylalka PDF
Ku dar qoraallo kala duwan
Is dhexgalka lala yeelanayo alaabada saddexaad ee daruurta